Wararka - Mudane Chen Wenjun, Kuxigeenka Madaxa Sirta Binjiang iyo Gudiga Maamulka ee Deegaanka Gaoxin ayaa booqday Shirkada Meari
Gudaha Kaamiro Go'an
Bannaanka Dibadda & Kameradda Janjeer
Mudane Chen Wenjun, Kuxigeenka Madaxa Sirta Binjiang iyo Gudiga Maamulka ee Deegaanka Gaoxin ayaa booqday Shirkada Meari
Mudane Chen Wenjun, Kuxigeenka Madaxa Sirdoonka Binjiang iyo Gudiga Maamulka ee Deegaanka Gaoxin ayaa booqday Shirkadda Meari si ay u ogaato macluumaadkeeda aasaasiga ah iyo horumarinteeda 4th , Dec. 2020. Maamulaha guud ee Meari Yuan Haizhong, Maareeyaha Guud Ying Hongli, kuxigeenka maareeyaha Wang Fan, Jin Wei, Qin Chao iyo Gong jie ayaa qaabilay Mr. Chen.
Mudane Chen wuxuu booqday Hoolka Muuqaalka Meari si uu waxbadan uga ogaado wax soo saarka Meari, la-hawlgalayaashiisa iyo kartidiisa tartan IWM. Wuxuu muujiyey qadarinta ku saabsan cilmi baarista iyo horumarka Meari ee tikniyoolajiyadda. Isla markaa, Maamulaha guud ee Meari wuxuu sameeyaa hordhac faahfaahsan.
Mudane Chen Wenjun wuxuu yiri, “Meari waxay ku qabsan laheyd waqtigan qaaliga ah xoojinta tikniyoolajiyadda guryaha ee caqliga badan, dardar galinta warshadaha iyo kobcinta awooda Meari ee tartan dhameystiran”
Mudane Yuan Haizhong wuxuu qadariyey talooyinka Mudane Chen wuxuuna la wadaagey in Meari ay ku adkeysan doonto abuurista daraasad teknolojiyadeed, isku dhafka kheyraadka la xiriira iyo horumarinta silsiladaha wax soo saarka gudaha.
Mr. Chen Wenjun, ayaa sawir la sameeyay kooxda Meari.